Nepali Christian Bible Study Resources - प्रार्थना के हो?
» अध्ययन मालाहरू » एक वर्षीय चेलापन पाठ्यक्रम » प्रार्थना के हो?
१) प्रार्थना आराधनामय हुनुपर्छ (लूका ११:१-२)। येशूले आफूले सिकाउनुभएको "नमूना प्रार्थना" (model prayer) मा यस कुरालाई जोड दिनुभयो। यसको तात्पर्य हरेक प्रार्थनाको सुरुमा सधैं आराधनाको लामो भाग हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर प्रार्थीले आफू अनन्तका सृष्टिकर्ता, सर्वोच्च महामहिमको नजिक जाँदैछु भन्ने कुरालाई सधैं ध्यानमा राख्‍नुपर्छ। प्रार्थना हल्का, आधा-मनको क्रियाकलाप हुनुहुँदैन।
उपवासको बारेमा मलाई बताउने पहिलो व्यक्ति मेरी आमापट्टिकी बज्यू जुलिया पोलोक हुनुहुन्थ्यो। मत्ती ६:१७-१८ को कुरा गर्दै यस प्रतिज्ञालाई उहाँले आफ्नो जीवनमा पटकपटक प्रमाणित गर्नुभएको कुरा मलाई बताउनुभयो। उहाँका पति एउटा ब्याप्टिस्ट मण्डलीमा डिकन हुनुहुन्थ्यो। विवाह गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँले रक्सी पिउन पूरै छोडिसक्नुभएको थियो। एक दिनको कुरा थियो, उहाँ विगतमा आफूसँग पिउने एकजान पूरानो साथीसित एउटा घरको छानामाथि काममा सँगै पर्नुभएछ। कुराकानीको क्रममा आखिरमा "एक गिलास मात्र" पिउनलाई भनेर उहाँ राजी बन्नुभयो। एक गिलास भन्दाभन्दै दुवैले थुप्रै गिलास पिए र यति माते कि ठूलो स्वरले गाउन थाले र छानाबाट औजारहरू समेत जथाभाबी फ्याँक्न थाले। प्रहरी बोलाइएपछि उनीहरू जबरजस्ती थानामा लगिए। अब जुलियाले डिकन पोलोकलाई थानाबाट छुटाउनुपर्ने भयो! उहाँले एकदमै पछुतो मान्नुभयो र यस्तो कहिल्यै नदोहोर्‍याउने प्रतिज्ञा आफ्नी पत्‍नीसित गर्नुभयो र मण्डलीका सामु उभिएर बेसरी क्षमा याचना गर्नुभयो र मण्डलीले उहाँलाई क्षमा दियो। तर उक्त घटनाले जुलियालाई स्तब्ध पार्‍यो र फेरी पनि श्रीमान कतै परीक्षामा परेर लड्नुहोला कि भन्ने उहाँलाई डर भइरह्यो किनकि आफ्ना बुबा र ससुरा दुवैजना पियक्कड हुनुभएको कुराको उहाँलाई सम्झना आयो। त्यसैले यस खराबीमाथि श्रीमानले पूर्ण विजय पाएको कुराको निश्चयता आफूलाई नमिलेसम्म उहाँका लागि उपवाससहित प्रार्थना गरिरहने उहाँले अठोट गर्नुभयो। कति लामो समयसम्म भनेर बताउनुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन तर धेरै दिनसम्म उहाँ उपवास बस्नुभयो। उहाँले मीठा-मीठा भोजनहरू तयार गर्नुहुन्थ्यो अनि विहान, दिउँसो र बुलुकीको खाने बेलामा श्रीमान मन्रोले भन्नुहुन्थ्यो, "आऊ न जुलिया, हामी बसेर अलिकति खाऊँ न," तर उहाँले जवाफ दिनुहुन्थ्यो, "मेरो फिक्री नगर्नुहोस्, मन्रो।" अन्तमा, परमेश्वरले श्रीमानलाई विजय दिनुभयो भन्ने कुराको आफ्नो हृदयमा शान्ति मिलेपछि उहाँले उपवास बस्न छोड्नुभयो र श्रीमानले बाँकी जीवनभरि एक थोपा रक्सी पिउनुभएन।
« ख्रीष्टमा हुर्काइ र विजयी जीवन (#४)
विश्वास र ख्रीष्टियन जीवन »